La kulan Boqorad soo dhaafay Masar ee ciyaarta taariikhiga ah ee Cleopatra Plus iyo safri mashiinka markii si ay u gaaraan hore Masar. Cleopatra Plus waa qayb ka mid ah taxanahan ka mid ah, naadi Cleopatra loo naqshadeeyey loona sameeyey horumarinta ee caalamiga ah ay ciyaareyso ay Technology ku salaysan ee London. Ciyaarta ayaa waxay bixisaa fursado badan dakhliga captivating in ciyaartoyda iyo sidaas IGT gasho weyn ka mid ah taxanahan boosaska.
IGT fadhigoodu yahay London xafiisyada ugu waaweyn ee ay ku Providence, Las Vegas taas oo ah xarun ciyaaraha ah, iyo Rome. Ururku wuxuu ka shaqeeyaa in ka badan 100 dalalka dunida oo dhan iyo baqdin dhaqaalaha baaxadda iyo badnaanta lacagta dhow dahay, waxa uu leeyahay fursado badan oo gunno in ay bixiyaan si ay ciyaartoyda in kulan ku abuuray by. Shirkadda Tani saarta noocyada kala duwan ee technology ciyaaraha ay la socdaan kulan booska for casinos online iyo offline ah.
Cleopatra Plus leeyahay 5 duntu iyo 40 paylines in la bixiyaa in ciyaartoyda. Waxaa jira fursado badan heshay oo ah qaab muuqaalada bonus ee ciyaarta this.
Heerka Up Feature- Tani waxay kuu ogolaanaysaa ciyaaryahanka u helaan sida ay tayada iyo duration ee ciyaarta uu ciyaaro, taas oo kuu ogolaanaysaa isaga lagu furo heerar sare.
Bonus Map- Siiyaa ciyaaryahanka map a hagaya kaas oo waxaa loo isticmaalaa marka bonus Cleopatra la shaqeysiin. Waxa kale oo ay ku siinaysaa dhigeeysa free.
dhigeeysa Free Bonus- Siinaya 5 dhigeeysa free la 1X multiplier a
Cleopatra Bonus- Iyada oo taageero ka map bonus, ilaa aad ku guuleysan karto in ay 30 dhigeeysa free dheeraad ah la ilaa multiplier 5x ama 10 super dhigeeysa la 50x multiplier a. Laakiin waxa ay ku xiran heerka aad quful.
Cleopatra, isagoo ku duurjoogta ah iyo duurjoogta ah ku duceysanayaan, Abaalmarinta Abaalmarinta ugu badan ee ciyaarta, haddii aad ka heli karto 5 iyaga ka mid ah wada on payline ah. The wilds Mire Waqaf oo badsatid fursada ay guusha ka sii. The 2 wilds siin multiplier 2x ah marka ay ku duceysanayaan.
Ciyaarta ayaa boqolkiiba ciyaaryahan ee ugu laabto 95% taas oo waa wax wanaagsan.
Furaha ciyaaro iyo dakhliga lamoodaa weyn out of Cleopatra Plus waa inuu ku dhex cayaaro iyo aad u badan si aad u cad u fahmaan xeerarka. Ciyaarta ayaa u suurtagashay in ay la wareegaan dareenka ciyaartoyda guud ahaan xitaa tayo leh graphic hoose iyo sidoo kale, inkastoo xaqiiqda ah calaamadaha aan ahayn, malana iyo hal abuur leh si ay ula xiriiraan theme ee qadiimiga Masar.